Zvinyorwa zveWWDC 2017 zvikamu zvave kuwanikwa | IPhone nhau
Zvinyorwa zveWWDC 2017 zvikamu zvave kuwanikwa
Kubva muna Chikumi apfuura June 5 Apple ichaburitsa shanduro nyowani dzeanotevera masisitimu anoshanda ayo anosvika kubva munaGunyana mune ayo maBhaibheri mazhinji, takaburitsa nhau zhinji nezvazvo, kunyanya kana tichitaura nezvenhau dzeumwe neumwe wavo. Asi isu tataurawo nezve izvo zvakaitika mukufamba kwemazuva akasiyana evakagadziri uye zvikamu izvo vagadziri vanobva kune ese Apple mapuratifomu vakapinda. Chimwe nechimwe chezvirongwa chine vhidhiyo yacho inoenderana kuitira kuti chero mugadziri asingaende anogona kuzvitarisa kubva chero kwavanenge vari. Asi kubva nhasi Apple inogonesa zvinyorwa zvemisangano.
Kana uchitarisa chero mhando yevhidhiyo, chinhu chega chatingaite kumirira kuti itambe zvizere kunze kwekunge isu tine indekisi yekutitungamira. Asi kana isu tichida kutsvaga, iyo inokurumidza nzira, kunyanya kana isu tichiziva zvatiri kutsvaga iri kuburikidza nezvinyorwa zvinoitwa neApple zvega zvega zvega zvikamu zvemazuva ano. Nenzira iyi, chero mugadziri anogona kutsvagisa mazwi akakosha kuti awane musoro wefariro nenzira iri nyore uye osvetukira kuchikamu chevhidhiyo kwayiri.
Zvinyorwa zvezvikamu zvinofambidzana nemavhidhiyo sekunge yaive index kuitira kuti tikwanise kukurumidza kuwana izvo zvinonyanya kutifadza. Kana usati wafunga kuyedza iOS 11, vakomana vanobva kuCupertino ivo vakatanga iyo yekutanga yeruzhinji beta yeIOS 11 mazuva mashoma apfuura, yeruzhinji beta inoenderana neyechipiri Kwidziridzo 1 yakatangisa zuva rapfuura, saka kana ukashinga kuiisa, zvese zvinoenderana nekuti unoda sei kuyedza nhau, iwe unofanirwa kuziva kuti kuve beta, hazvishande. zvachose Right.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Zvinyorwa zveWWDC 2017 zvikamu zvave kuwanikwa
Nyora zvinyorwa zvakananga kune yako Apple Watch neSnipNotes
Yekupedzisira Shot pane iPhone mushandirapamwe inonzi Portrait muCanada